Weeraryahankii hore ee Manchester City, Liverpool, Inter Milan iyo AC Milan ee Mario Balotelli ayaa wada-hadallo kula jira kooxda heerka labaad ee Ingiriiska ee Barnsley. 30 jirkan Talyaaniga ah ayaa koox la’aan ahaa tan iyo markii la kansalay heshiiskiisii Bresica. (Sun)
Manchester City waxay diyaar u tahay inay dardar geliso sidii ay ula soo saxeexan lahayd kabtanka Barcelona ee Lionel Messi bisha January. 33 jirka reer Argentina ayaa heshiiskiisa Camp Nou uu ku egyahay dhamaadka xili ciyaareedkan, markaas oo uu si xor ah iskaga tegi karayo. (Sun)
19 jirka difaaca uga ciyaara Schalke ee Malick Tiaw oo u dhashay Jarmalka oo heshiis cusub saxeexay xagaagii dhowaa ayaa lala xidhiidhinayaa Liverpool oo laga yaabo inuu bisha January usoo dhaqaaqo. (Sporte.de)
Chelsea waxay doonaysaa inay lasoo saxeexato xiddiga da’da yar ee Borussia Dortmund iyo qaranka England ee Jude Bellingham, kaas oo ay gelin doonaan booskii ay hore ugu doonayeen Declan Rice oo West Ham dhexda uga ciyaara. (Eurosport)
Tababare Pep Guardiola ayaa la sheegay in aanu wali go’aan ka gaadhin mustaqbalkiisa Manchester City. Heshiiska uu Guardiola kula jiro City ayaa ku eg xagaaga soo socda. (Goal)
Leicester City waxay dusha kala socotaa difaaca bidix ee reer Portugal ee Nuno Mendez oo 18 jir ah, isla markaana qiimihiisa Sporting Lisbon lagu burburin karayo £40 milyan oo Gini. (Mail)
Goolhayaha Chelsea ee Kepa Arrizabalaga waxa uu doonayaa inuu mushahar dhimis sameeyo, si uu bisha January amaah ugaga bixi karo Stamford Bridge. 26 jirkan reer Spain oo boos la’aan ku noqday Blues ayaa doonaya inuu helo boos joogto ah oo uu ka ciyaaro si uu qayb uga noqon karo xulka Spain ee Euro 2020. (Sun)
Manchester City waxay kula tartami doontaa Bayern Munich saxeexa 23 jirka reer Switzerland ee dhexda uga ciyaara Borussia Monchengladbach ee Denis Zakaria. (Calciomercato)
Laacibkii hore dhexda uga ciyaari jiray Juventus ee Claudio Marchiso ayaa ka baryay kubbad-sameeyaha Manchester United ee Paul Pogba oo 27 jir ah, inuu ku laabto kooxdiisii hore ee Talyaaniga ahayd ee Juve. (Mirror)
Manchester United waxay qorshaynaysaa in bisha January ay iibiso saddexda ciyaartoy ee Phil Jones oo 28 jir ah, Sergio Romero oo 33 jir ah iyo Marcos Rojo oo 30 jir ah. (MEN)
Wada-hadalladii ay Wolves kula jirtay Adama Traore ayaa istaagay, sababtoo ah, laacibkan reer Spain ayaan ku faraxsanayn waqtiga laga siiyo kooxda. 24 jirkan ayaa hore loola xidhiidhiyey Barcelona. (Goal)
West Ham ayaa loo bandhigay fursad ay kula saxeexan karto weeraryahanka Real Madrid ee Mariano Diaz oo 27 jir ah. (Mail)
Arsenal ayaa ka fiirsanaysa inay Inter Milan u bandhigto heshiis ciyaartoy isweydaarsi ah, kaas oo ay iskugu beddelan karayaan Christian Eriksen oo 28 jir ah iyo Granit Xhaka oo 28 jir ah. (Corriere dello Sport)
Arsenal waxay wada-hadallo kula jirtaa difaaceeda reer France ee William Saliba si heshiis amaah uu ugu maqnaado illaa xili ciyaareedka dambe. 19 jirkan ayaan wali u safanin Gunners. (Evening Standard)
Weeraryahanka Chelsea iyo France ee Olivier Giroud oo 34 jir ah ayaa doonaya inuu ka tago Stamford Bridge bisha January haddii aanay kooxdu kordhin waqtigiisa ciyaareed muddada ka hadhay suuqa jiilaalka. (The Athletic).